सेनामा सिपाहीका अनेक पिडा, किन जागिर छोड्न बाध्य छन् ? - Nepali Online News Media-shikharnews.com
सेनामा सिपाहीका अनेक पिडा, किन जागिर छोड्न बाध्य छन् ?
२०७६ जेठ ३० बिहीवार
नेपाली सेनाका हामी तल्लो तहका पीडितहरूको गुनासो पोख्ने एक मात्र साप्ताहिक पत्रिका साँघु साप्ताहिक नै हो । यो पटक हामी जवानरसिपाहीले हाम्रो नेपाली सेनामा झण्डै डेढ दशकको जागिरको अवधिमा भोगेका केही समस्या, पीरमर्का प्रकाशनका लागि पठाएका छौं । कृपया स्थान दिएर हाम्रँ स्वच्छ छविका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा चीफ सा’बको ध्यानाकर्षण गराई दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । सम्पादकज्यू, हाल नेपाली सेनामा एसएलसी र प्लस टु गरेका हामी सिपाहीहरू धेरै छौं । तर, दुःखको कुरा सिपाहीबाट एक खुड्किलो माथि लेस नायक हुनका लागि सेनाले फास्ट ट्रयाक नीति लागू गरेकाले धेरै मर्का परेको छ । पढे, लेखेका हामी सिपाही जागिर खाएको १३/१४ वर्षसम्म पनि लेस नायकसम्म पनि बढुवा हुन नपाएपछि दक्ष जनशक्तिले धमाधम राजीनामा दिएर नेपाली सेना छाड्न बाध्य हुनु परेको छ ।
एसएलसी र फस्ट क्लास गरेका हामी दुःखी सिपाहीको गुनासोका बारेमा चीफ सा’बबाट अवश्य सुनवाई हुनेछ भन्ने आशा गरेका छौं । सिपाहीबाट लेस नायकमा पदोन्नति हुनका लागि फास्टट्रयाक नीति लागू गरिएको छ । अनि फेरि लेस नायकबाट नायक नायकबाट हबल्दार हुनका लागि चाहिं फास्टट्रयाक नीति लागू छैन । लेस नायकबाट नायक हुनका लागि पनि फास्टट्रयाक नीति छैन । यो खारेज गरिएको छ । सिपाहीबाट लेस नायक हुन हामी ३२/३३ वर्षका सिपाहीहरूले २३/२४ वर्षका सिपाहीहरूसंग प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य छौं । अहिलेका जल्दोबल्दो उमेरका केटाहरूसंग शारीरिक र लिखित परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गराइन्छ । हामी उमेर ढल्केका सिपाही र बढ्दो जवानीका ती सिपाहीहरूसंग हाम्रँे प्रतिस्पर्धा न्यायिक भएन, हामीमाथि अन्याय भयो भन्ने गुनासो हाम्रो हो ।
हेडक्वार्टरका जर्नेलहरूका आफन्त, भेगी, चाकडीवालालाई पदोन्नति गराउनका लागि कहिले के नियम लागू गर्ने, कहिले के नियम खारेज गर्ने गरिन्छ । अनि हामी सोर्सफोर्स नहुने गरीबका छोराहरू चाहिं डेढ दशकसम्म पनि एक तह बढुवाबाट बञ्चित छौं ! योभन्दा अन्याय के हुन्छ चीफ सा’ब ? फास्टट्रयाक लगाउने हो भने सबै तहको बढुवामा लगाइयोस् । सिपाहीबाट लेस नायक हुनका लागि मात्र किन यत्रो तगारो हालिएको छ ? चीफ सा’ब हाी सारै दिक्दार छौं । चीफ सा’बाट हाम्रो पीडामा मल्हम पट्टी लाग्ने छ र हाम्रँ पीरमर्काको सुनवाई हुनेछ भन्ने आशा गरेर बसेका छौं ।
पढेलेखेका, योग्य, डिउटी, काममा इमानदार, सिपाहीहरू राशन र प्राइभेट फण्डबाट त ठगिएकै छौं भने बढुवामा झनै ठूलो अन्यायमा परेका छौं । फास्टट्रयाक नै आवश्यक हो भने हाम्रै समकक्षीसंग प्रतिस्पर्धा नीति लागू गरियोस् । १०÷१२ वर्ष जुनियरहरूसंग हाम्रो प्रतिस्पर्धा गराएर बेइज्जतीपूर्ण अन्याय नगरियोस् । सिपाहीबाट लेस नायकमा बढुवा हुनबाट बञ्चित भएपछि दिक्क भएर राजीनामा दिंदै हाम्रा धेरै साथीहरू नेपाल आर्मी छाडेर विदेशीको सेवा गर्न वैदेशिक रोजगारीमा हामफाल्न थालेका छन् । राज्यको लाखौं रकम खर्च गरेर तालिम प्राप्त जनशक्ति विरक्तिएर राजीनामा दिंदै हिंड्न थालेका छन् । यो राष्ट्र र नेपाली सेनाका लागि पनि नोक्सानीको विषय हो । चीफ सा’बको ध्यान जावोस् भन्ने अनुरोध गर्दछौं । –अन्यायमा परेका सिपाहीहरू, नेपाली सेना
एनआरएनए निर्वाचन अपडेटस् मतदानस्थलमा विवाद कायमै
मन्त्रिपरिषद तत्काल पुनर्गठन नहुने प्रचण्डको संकेत
फिल्म ‘हिजोआजका कुरा’ बनाउँदै सन्तोष पन्त, छोराले निर्देशन गर्ने
विश्वभरका सैनिकको ध्यान चीनको उहानमा
चीनको यो निर्णयले अमेरिकालाई झट्का